Kọmputa na mpụga ike disks na-adịghị pụrụ ịdabere na ebe ndabere gị data. Ha nwere ike okuku, na-rụrụ arụ ma ọ bụ ọbụna ihichapụ gị faịlụ mgbe. Kasị pụrụ ịdabere na ebe ndabere gị data bụ "ígwé ojii". Ígwé ojii nkwado ndabere, makwaara dị ka online ndabere bụ ụzọ nke na-akpakọba ma ọ bụ akwado data online on a nkesa ebe. Dị nnọọ ka nkịtị ndabere, i nwere ike inwe ohere gị faịlụ mgbe ọ bụla ị chọrọ ma gị mkpa internet ka ịnweta ha.
3. Sugar mmekọrịta
E nwere ọtụtụ nke 'Cloud' ma ọ bụ online ndabere ọrụ na-ekwe ka ị ndabere gị data na ha nkesa. The ọrụ na-emekarị na-enye ọrụ na a ụfọdụ nchekwa size for free na mgbe ọ na-e okụre, ha ga-mkpa iji kwụọ ụgwọ maka mmezi nchekwa na kwa ọnwa ndabere ma ọ bụ kwa afọ. N'ihi ya, ọ dị ka ị na-ego ndị nchekwa na nkwado ndabere na mpaghara gị data ma ọ bụ dị ka nkịtị nkwakọba nchekwa. Ego nke nchekwa ị na-eji na-adabere na gị mkpa, ọ bụrụ na ị bụ ụdị na Akwadoo elu ihe niile, ị ga-mkpa iji nweta a ohere buru ibu. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ mkpa na nchekwa na-echekwa obere data, mgbe ahụ, ọbụna free atụmatụ ga-ezuru gị.
Ọrụ ndị a na-emekarị nwere ngwa ọdịnala n'ihi ntị, kọmputa, mbadamba wdg na ọrụ nwere ike ohere ha faịlụ na ihe ọ bụla nke a na ngwaọrụ. Ha nwekwara ike mekọrịta ha faịlụ maka mfe ohere na niile ha ngwaọrụ n'oge ọ bụla.
N'okpuru ebe nyere bụ ndepụta nke n'elu 5 ngwaọrụ-ndabere ka ígwé ojii.
Dropbox kwuru na-abụ otu nke kasị mma Android ígwé ojii nkwado ndabere ngwa. Ọ na-enye gị a 2 GB nke free ohere nchekwa na-amalite na ma ike kwalite ruo 16 GB na ọtụtụ mfe ụzọ. Ọ bụ kensinammuo akpaka ndabere e ji mara nke bụ a zuru okè atụmatụ maka ndị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara ha foto, videos na ndị ọzọ na-akpaghị aka data maka mfe ohere mgbe e mesịrị. Ọ na-akwado dị iche iche nyiwe si Windows, Mac, Linux, iPad, iPhone, Android na blackberry. Dropbox nwere a adịchaghị ọrụ a maara dị ka Dropbox Pro. The Pro bụ n'ihi na ndị mkpa ibu nchekwa. Ọ na-enye ọrụ ruo 1 TB nke online ohere.
• Mmekọrịta faịlụ dị mfe n'etiti gị na ngwaọrụ.
• Dropbox-akwado ndị na dị iche iche mobile nyiwe na sistem dị.
• Ọrụ adịghị-enwe nchegbu banyere na sava n'ihi na ha bụ mgbe niile online. Ọ dịghị Downtime.
• The Dropbox ngwa dị mfe iji wụnye.
• Ọrụ nwere ike nwere ohere ehichapụ faịlụ na mbụ nsụgharị nke Dropbox.
• Mgbe ụfọdụ achọta faịlụ pụrụ isi ike na-eme ka faịlụ ike ịchọta.
Copy bụkwa a ígwé ojii ọrụ na-enye ọrụ ikike bulite na mekọrịta faịlụ gafee na-akparaghị ókè ngwaọrụ. Ọ bụ uru maka ma onye na azụmahịa ojiji. Ọ nwere otu n'elu ikpo okwu ebe ruo 5 ọrụ nwere ike nwere ohere ịkọrọ faịlụ. Ọ nwere pụrụ iche n'ụzọ nke na-ekere òkè nchekwa, ndị dị otú ahụ na ị nwere ike kewaa ohere na ndị ị na-akọrọ a nchekwa na. Ụfọdụ n'ime ihe na-akpali na-adịbeghị anya atụmatụ atụkwasịkwara Copy bụ Chromecast nkwado, otú i nwere ike enuba music, photos nakwa dị ka videos site na ngwaọrụ gị na na gị TV nanị site na ịme ọpịpị na Chromecast na akara ngosi na Detuo.
• The adịchaghị ndenye aha bụ ọnụ ala tụnyere ndị ọzọ ígwé ojii ndabere ọrụ.
• Easily mekọrịta faịlụ n'etiti gị niile deices.
• Ọ na-akwado iche iche nyiwe na sistem.
• The ngwa dịkwa mfe ma dị mfe iji wụnye.
• Ị nwere ike ghara ịhụ niile nke gị na-adịbeghị anya faịlụ uploads site na ngwaọrụ gị Detuo na otu ebe.
SugarSync bụ ihe online data ndabere n'elu ikpo okwu na, dị ka ndị kasị dị irè ndabere ọrụ na-ígwé ojii, na-enye na-achịkwa ụzọ ị na-azọpụta gị dijitalụ faịlụ online. Ọ bụkwa bara uru na automating nke ọma metụtara ọrụ nke na-edebe gị online ọmụma ugbu mgbe niile. Ma ị chọrọ iji aka ya onwe gị ma ọ bụ na ị chọrọ ejigide gị ndabere na autopilot, SugarSync-eme ka ọ dị mfe ime nke a. SugarSync bụ otu n'ime ole na ole ndabere ọrụ na-adịghị enye akparaghị ókè ohere. Ị nwere oke ịhọrọ n'etiti atọ atụmatụ, onye ọ bụla nke atụmatụ nwere nchekwa ịgba. Iji nweta ihe nchekwa, i nwere iji kwalite akaụntụ gị.
• SugarSync nwekwara ihe ngwa na ọ na-akwado iOS na Android ngwaọrụ.
• Ọ na-nwere akpaka ndabere ma ọ bụ syncing atụmatụ dị nnọọ ka ọtụtụ ndị ọzọ ọrụ.
• Ọ dịkwa mfe iji wụnye na ojiji
• Ọrụ nwere ike nanị na-500 GB nke nchekwa.
Google Drive bụ otu n'ime ihe ndị kasị pụrụ ịdabere na mgbanwe ígwé ojii nkwado ndabere ọrụ na nza nke arụpụtaghị ihe. Ọ bụ free na ị nwere ike niile gị faịlụ echekwara online eji gị smartphone, mbadamba na kọmputa. Na Google Drive, i nwere ike ohere gị videos, music, photos, akwụkwọ wdg na-kwadoo n'enweghị. I nwekwara ike na-agba ndị ọzọ ele, dezie ma ọ bụ ịhapụ ihe na ihe ọ bụla nke gị faịlụ.
• Otu n'ime ndị dị ọnụ ala ígwé ojii nkwado ndabere ọrụ.
• 15 GB free atụmatụ maka ọrụ.
• pụrụ iche n'ụzọ ịkọrọ faịlụ n'etiti enyi.
• ọmụma dị nnọọ nta dị online maka ọhụrụ ọrụ na-ịmụta otú iji Google mbanye.
• Ọrụ nwere ike tinye okwuntughe ha faịlụ.
OneDrive bụ a ojii nchekwa ozi site Microsoft. Dị ka ndị ọzọ ojii nchekwa ọrụ, ọ na-ekwe data nkwado ndabere na mpaghara nwere ngwa n'ihi na ma smartphones na kọmputa. Ọ bụghị ihe ọhụrụ nke otutu ma kemgbe nnọọ a pụrụ ịdabere na ọrụ ruo ọtụtụ afọ ugbu a.
• akwado multiple nyiwe na ma mobile na kọmputa.
• Magburu onwe ngosi mmịfe maka foto ngosi.
• ala na-eri nhọrọ.
• adịghị akwado ọdịyo na video gụgharia.
• Ọ dịghị ihe search atụmatụ ke Android na iOS ngwa.
Top CD Player na 2015
Top 15 3GP video Ntụgharị maka Windows na Mac
10 Ugbu ngụsị akwụkwọ Speeches
> Resource> Top List> 5 Ngwaọrụ nkwado ndabere na mpaghara na ekwentị Cloud akpaghị aka